एमाले महाधिवेसनको चर्चित स्टेजः कसरी बन्यो यस्तो संरचना ? – Gandaki News
पोखरा, १० मंसिर/ अहिले चर्चा चितवनकै छ । एमाले महाधिवेसन र महाधिवेसन भित्रका आन्तरिक व्यवस्थापनको चहलपहल मिडियाभरी छ । मन्च तयार भैसकेको छैन, अन्तिम चरणमा छ । नेता कार्यकर्ताहरु चितवनमा ओईरिन थालिसके । मन्च बनाईएको ठाउँका फोटा, चितवन छिर्ने बाटो र छिरेपछिको साजसज्जा सामाजिक सन्जालमा बढी रुचाईएका र आलोचनात्मक तस्विरहरु हुन् ।
एमालेको दशौं महाधिवेसनको जुन मन्च बन्दैछ, यसको मुख्य डिजाईनर पोखराका इन्जिनियर हुन् । पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पसका पूर्व डिन डा. भरत पहारी र उनको टीमले करिव ३ महिनाको तयारीमा मन्चको डिजाईन गरेका हुन् । ‘पहिले नै कन्सेप्ट बनाईरहेका थियौं । पार्टीले तीन महिनाभित्र महाधिवेसन गर्ने भनेर मिति तोक्यो । अनि हाम्रो टीम खटियो,’ उनले भने, ‘यो मन्च सामान्य मन्च मात्रै होईन । यसमा धेरै विम्वहरु मिसिएका छन् ।’
खासगरी अन्तराष्ट्रिय मन्चहरु निर्माण गर्दा प्रतिक चिन्हको प्रयोग गरिन्छ । एमालेले पनि यो महाधिवेसनमा गैंडा मानवलाई प्रतिक चिन्ह बनाएको छ । ‘समाजमा सहिष्णुता स्थापित गर्न हामीले गैंडा मानवलाई प्रतिक बनाएका छौं । यो भनेको प्रकृति र सभ्यतालाई जोडेको हो । हामीले सँधै भन्ने गरेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने नारा समाजले आफ्नै बनाओस् भनेर अलि बढी मुखरित गरेका छौं,’ पहारी भन्छन्, ‘एमालेले बैचारिक रुपमा कसरी प्रश्तुत हुनुपर्छ भन्ने कुराको सिम्बोल, लेआउट, सेट र लोकेसनमा डिफाईन गरेका छौं । अहिले राजनीतिक पार्टीहरुमा बैचारिक प्रष्टता आवश्यक छ ।’
हेर्दा जति आकर्षक मन्च बनेको छ, उत्तिकै सामाजिक संस्कारहरु विम्वित पनि छ । ‘राजनीतिको केन्द्रविन्दु विकास हो । विकासलाई राजनीतिले केन्द्रविन्दु मानेन । हामीले विकासमा केन्द्रित गर्नका लागि चितवन भनेको प्राकृतिक संरचनाको कुरा हो भनेर यसलाई वातावरणमैत्री ढंगले सम्बोधन गर्ने प्रयास ग¥यौं । मन्च पनि वातावरणमैत्री छ,’ उनले थपे, ‘मन्च वरिपरि प्राकृतिक संरचनासँग जोडिएका चित्र मात्रै छन् । राजनीतिलाई प्रतिविम्बित गर्ने भनेको उत्साह भर्ने हो । मन्चको चारैतिर उत्साहको प्रतिक रातो रंग प्रयोग गरेका छौं ।’
मन्चमा संस्कृति र सभ्यता झल्किने गरी सजावटको प्रवन्ध मिलाईएको छ । ‘एमालेको परिचय भनेको सूर्य चिन्ह हो । सबै क्षेत्रमा सूर्यलाई प्रतिविम्बित गरेका छौं । लेआउट पुर्वपश्चिम छ । मन्च उत्तर दक्षिण फर्किएको छ । नारायणीको किनारसँग समानान्तर छ,’ पहारी अघि भन्छन्, ‘बढीभन्दा बढी जनतालाई म्यासेज प्रतिविम्बित हुने गरी लेआउट गरेका छौं । विकासका लागि प्रस्थान विन्दु पहिल्याउने गरी सहरको सौन्दर्यीकरणलाई ध्यान दिएका छौं ।’
उनको टीममा डिजाईनर विनोद श्रेष्ठ र महेन्द्र श्रेष्ठ पनि छन् । मञ्च बनाउन ५ सय भन्दा बढी स्वयसेवक र कामदारहरु खटिए । मन्च निर्माणमा ५० लाख भन्दा बढी खर्च भएको पहारीले जानकारी दिए ।